Shina 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm Volavolan-drano vita amin'ny vera mafana sy mpamokatra | LYDGLASS
Ny fanondranana hafanana dia dingana manimba izay ihafana ny maripana 280 ° mandritra ny ora maromaro mandritra ny ora maromaro mandritra ny ora marobe mandritra ny maripana hafanana manokana ny takelaka fitaratra henjana.
Volomaso voaromotra hafanana, Fandroahana hafanana
Ny vera mitsingevana rehetra dia misy tsy fahalavorariana. Karazana tsy fahalavorariana iray dia ny fampidirana nickel sulfide. Ny ankamaroan'ny fampidirana dia milamina ary tsy miteraka olana. Misy ihany anefa ny mety fampidirana izay mety hiteraka fahatapahana tampoka amin'ny fitaratra tsy misy enta-mavesatra na enta-mavesatra.
Ny fanondranana hafanana dia dingana iray izay mety hampiharihary ny fampidirana ao anaty vera voa-tezitra. Ny fizotrany dia mitaky fametrahana ny vera voakolokolo ao anaty efi-trano ary mampiakatra ny maripana ho eo amin'ny 280ºC mba hanafainganana ny fanitarana sulfida nickel. Izany dia mahatonga ny fitaratra misy fampidirana nickel sulfide hamaky ao amin'ny efi-drano mahamay, amin'izay hampihena ny mety ho fahatapahan'ny saha.
1: Inona no vera nopotsehina hafanana?
Ny fitsapana mando hafanana dia ny vera voadidy ho 280 ℃ miampy 10 minus 10 ℃, ary mitazona fotoana iray, vita haingana ny fifandimbiasan'ny nickel sulfide amin'ny vera, ka ny fipoahan'ny vera azo vaky volo tamin'ny fanandramana notampohan'ilay hafanana. lafaoro, amin 'izay, ny fihenan'ny post-fametrahana fitaratra nipoaka.
2: Inona avy ireo fiasa?
Ny vera voarona hafanana dia tsy vaky tampoka ary azo antoka tanteraka.
4-5 heny mahery noho ny vera tsy misy fangarony.
Ny fahamendrehana ny fitsapana rendrika hafanana hatramin'ny 98.5%.
Vaky amin'ny sombin-javatra kely nefa tsy mampidi-doza tsy misy sisiny miforitra na zoro maranitra.
3: Maninona no milomano ny hafanana?
Ny tanjon'ny fanondrahana hafanana dia ny hampihenana ny vaky vaky ny Toughened Safety Glass vaky tampoka aorian'ny fametrahana azy, noho izany mampihena ny vidin'ny fanoloana, fikojakojana sy fikorontanana ary ny loza mety hitranga amin'ny fanasokajiana ho tsy azo antoka ilay trano.
Ny lasam-pisakafoanana voadona matevina voadona hafanana dia lafo kokoa noho ny fitaratra mahazatra fiarovana mafy, noho ny fanodinana fanampiny.
Fa raha ampitahaina amin'ny solony na ny tena vidin'ny fanoloana ny vera Toughened Safety Glass any an-tsaha, dia misy fanamarinana lehibe ho an'ny vidin'ny fizotrany fanampiny.
4: Aiza no tokony hafanaina ny hafanana
Ireto fampiharana manaraka ireto dia tokony hodinihina amin'ny fanondranana hafanana:
Balustrades amin'ny firafitra.
Infill Balustrades - raha olana ny fallout.
Mitsilopilopy ambony loha.
Spandrels - raha tsy mihamafy ny hafanana.
Glazing amin'ny rafitra miaraka amin'ny Spider na fittings hafa.
Varavarana fitaratra tsy misy bika ivelany ivelany.
5: Ahoana no ahalalantsika fa lena ny vera?
Tsy azo atao ny mahafantatra fa ny vera dia lena lena na tsy amin'ny fahitana na fikasihana. Na izany aza, Timetech Glass dia manome tatitra amin'ny antsipiriany (ao anatin'izany ny sary an-tsary) isaky ny tsingerin'ny Heat Soaked mba hampisehoana fa ny Heat dia lena.
6: Misy haavo fitaratra azo hafana ve?
Ny hatevin'ny 4mm ka hatramin'ny 19mm dia azo hafanaina
Teo aloha: Fitaratra volafotsy, fitaratra tsy misy varahina
Manaraka: 5mm 6mm 8mm 10mm varavarana fikosoham-baravarankely
10mm vera nohosorana hafanana
12mm vera nohosorana hafanana
4mm vera nohosorana hafanana
5mm vera nohosorana hafanana
6mm vera nohosorana hafanana
8mm vera voarona hafanana
Heat vera fiarovana azo lena
Glass fitondra mando hafanana